‎Codka Waayaha Cusub @ttb.twr.org/somali op Apple Podcasts
Codka waayaha Cusub wuxuu qayb ka yahay hay’ad dadka barta Kitaabka Qodduuska ah, oo loo yaqaanno (Thru-the Bible) ama Dhexmarka kitaabka Qodduuska ah. Taxanahan waxaa isku dubbariday horraan Ditoor J.Vernon McGee, waxaana lagu turjumay, oo lagu jaangooyey in ka badan 100 luuqadood iyo lahjado. Waxaa loo qaabeeyey barnaamijyo ka kooban 30 daqiiqo oo isku xig-xiga, kuwaasoo dhegaystaha uu ku baranayo Baybalka oo dhan. Iminka barnaamijyadaas oo dhan, waxay kugu jiraan internetka.
Waxaanan ku faraxsan nahay in aad dooratay bal inaad wax badan ka barato Hadallada Ilaah adigoo dhegaysanaya barnaamijyadaas. Waxaa haddaba lagugu adkaynayaa inaad haatan dhegaysato ugu yaraan hal barnaamij maalintiiba, ka billaabata Isniinta ilaa iyo Jimcaha. Haddii aad sidaa yeesho toddobaad waliba, ayaa shanta sannadood ee soo socota ku baran doontaa qisooyinka kitaabka Qodduuska ah.
Codka Waayaha Cusub @ttb.twr.org/somali Thru the Bible Somali
Yeremyaah 49:23-52:34, Baroorashadii
Yeremyaah 44:7-49:17-18, 20
Yeremyaah 36:24-39:1-7,12, 14, 24